အသုံးပြုသူ:QXQ080/sandbox - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် နှင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်
၅.၁ လက်ရှိ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် ဖွဲ့စည်းမှု
၅.၁.၁ လက်ရှိ တရားလွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းထားရှိမှု
၁၀ တရားလွတ်တော် ကြီးကြပ်မှု အောက်၌ အဆင့်ဆင့်သောတရားရုံးများစာရင်း
၁၀.၂.၂.၁ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း
၁၀.၂.၂.၂ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း
၁၀.၃.၁ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရား လွှတ်တော်
၁၀.၃.၂.၁ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်း
တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် နှင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်[ပြင်ဆင်ရန်]
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်ပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ၏ အခန်း (၆) တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍကို ဖော်ပြထားပါသည်။
( ဂ ) နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး
ကချင်ပြည်နယ် ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ တွင် ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် ကို လည်းကောင်း ၊
ကယားပြည်နယ် ၊ လွိုင်ကော်မြို့ တွင် ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကို လည်းကောင်း ၊
ကရင်ပြည်နယ် ၊ ဘားအံမြို့ တွင် ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကို လည်းကောင်း ၊
ချင်းပြည်နယ် ၊ ဖလမ်းမြို့ တွင် ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကို လည်းကောင်း ၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ မုံရွာမြို့ တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်ဒေ​သကြီးတရားလွှတ်တော်ကိုလည်းကောင််း ၊
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ထားဝယ်မြို့ တွင် တနင်္သာရီတိုင်ဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် ကိုလည်းကောင်း ၊
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပဲခူးမြို့ တွင် ပဲဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် ကိို လည်းကောင်း ၊
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ မကွေးမြို့ တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် ကို လည်းကောင်း ၊
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ မန္တလေးမြို့ တွင် မန္တလေးတိုင်ဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် ကို လည်းကောင်း ၊
မွန်ပြည်နယ် ၊မော်လမြို​င် မြို့ တွင် မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် ကို လည်််််း​ကောင်း ၊
ရခိုင်ပြည်နယ် ၊စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် ကို လည်းကောင်း ၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ရန်ကုန်မြို့ တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် ကို လည်းကောင်း ၊
ရှမ်းပြည်နယ် ၊တောင်ကြီးမြို့ တွင်ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် ကို လည်းကောင်း ၊
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ပုသိမ်မြို့ တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် ကို လည်းကောင်း ​တည်ရှိပါသည်။
တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်နှင့်တရားသူကြီးများ ခန့်အပ်ခြင်း
လက်ရှိ တရားလွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းထားရှိမှု[ပြင်ဆင်ရန်]
ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် နှင့် တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်များကို အသက် (၄၅)နှစ် မှ (၆၅)နှစ် ထိ သတ်မှတ်ထာသော တရားလွှတ်​တော်တရားသူကြီးချုပ် (၁)ဦး အပါအဝင် တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးများကို အနည်းဆုံး (၃)ဦး မှ အများဆုံး (၇)ဦး ထိ အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားပါသည်
ဦး တူးဂျာ တရားသူကြီးချုပ်
ဦး စောစံလင်း တရားသူကြီးချုပ်
ဦး ဝင်းမြင့်ကျော် တရားသူကြီးချုပ်
ဦး မျိုးမောင် တရားသူကြီးချုပ်
ဒေါ် ပိုက်ပိုက်အေး တရားသူကြီးချုပ်
ဦး မောင်မောင်အေး တရားသူကြီးချုပ်
ဦး စိန်ထွန်း တရားသူကြီးချုပ်
ဦး ကြည်သိန်း တရားသူကြီးချုပ်
ဦး ခင်မောင်ကြီး တရားသူကြီးချုပ်
ဒေါ် ဝါဝါထွန်း တရားသူကြီးချုပ်
ဦး လှအေး တရားသူကြီးချုပ်
ဦး ကြွယ်ကြွယ် တရားသူကြီးချုပ်
ဦး မျိုးညွန့် တရားသူကြီးချုပ်
“တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် (၁၄) ခု၏ Website များ လွှင့်တင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း” ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် ပြည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက် များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် “အားလုံးအတွက် တိုးတက်ကောင်းမွန်သော တရား မျှတမှုဆီသို့” ဆိုသော ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းအသစ် (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကို ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းနယ်ပယ် (၅) ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ “အများပြည်သူ၏ အသိအမြင်ကို မြှင့်တင်ပေးရန်” ဟူသည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ရပ်လည်း ပါဝင် ပါသည်။  ထို လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အောက်တွင် “အများပြည်သူဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက် အစီအစဉ် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း” ဟူသည့် မဟာဗျူဟာ အစီအစဉ် ၂.၁.၃ ထည့်သွင်း၍  တရားလွှတ်တော်များ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ ရေးဆွဲလွှင့်တင်နိုင်ရန် ၂၀၁၉ နှင့် ၂၀၂၀ မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ တွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် (၁၄) ခု၏ Website များ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သဖြင့် ယနေ့မှစ၍ စတင်လွှင့်တင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
တရားလွှတ်တော် Website အားလုံး၏ Design အပြင်အဆင်များမှာ တစ်ပြေးညီဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တရားလွှတ်တော်များ၏ အမှုခေါ်စာရင်းများ၊ လက်ခံကြားနာသည့် အမှုများ၏ အခြေအနေ၊ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သည့် သတင်းများ၊ တရားရုံးလိပ်စာများ၊ လေလံဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ရှေ့နေရှေ့ရပ် ကဏ္ဍ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများစသည်ဖြင့် ကဏ္ဍ စုံလင်စွာ ဖော်ပြထားသဖြင့် ရှေ့နေရှေ့ရပ်၊ အမှုသည်၊ ဆက်စပ် အဖွဲ့အစည်းများ စသည့် တရားရုံးအသုံးပြုသူများအပြင် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များကို စိတ်ပါဝင်စားသည့် အများပြည်သူအတွက် များစွာ အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
တရားလွှတ်တော်များ၏ Website များကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ အောက်ပါလင့်များမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-
Copyright © 2019 Supreme Court of the Union. All Rights Reserved.
The Supreme Court of the Union No. 54, Thiri Mandine Street, Othara Thiri Township, Nay Pyi Taw Website: http://www.unionsupremecourt.gov.mm
တရားလွတ်တော် ကြီးကြပ်မှု အောက်၌ အဆင့်ဆင့်သောတရားရုံးများစာရင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ခရိုင်တရားရုံး (၅)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၂၅)ရုံး
ခရိုင်တရားရုံး (၉)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၃၆)ရုံး
ခရိုင်တရားရုံး (၂)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၇)ရုံး
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းတရားရုံး (၁)ရုံး နှင့် မြို့နယ် တရားရုံး (၆)ရုံး ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံး (၄)ရုံး နှင့် မြို့နယ် တရားရုံး (၉)ရုံး ၊ ခရိုင် တရားရုံး (၁၀)ရုံး နှင့် မြို့နယ် တရားရုံး (၄၀)ရုံး ။
ခရိုင်တရားရုံး (၃)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၁၀)ရုံး
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းတရားရုံး (၁)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၆)ရုံး ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံး (၂)ရုံး ၊ မြို့နယ်တရားရုံး (၄)ရုံး ၊ ခရိုင်တရားရုံး (၄)ရုံး ၊ မြို့နယ် တရားရုံး (၁၄)ရုံး
ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံး
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံး (၂)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၅)ရုံး ၊ ခရိုင်တရားရုံး (၃)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၁၆)ရုံး
ပအို့ဝ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တရားရုံး
ခရိုင်တရားရုံး (၆)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၂၆)ရုံး
ခရိုင် တရားရုံး (၄)ရုံး နှင့် မြို့နယ် တရားရုံး (၂၈)ရုံး
ခရိုင်တရားရုံး (၂) နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၁၄)ရုံး
ခရိုင်တရားရုံး (၄)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၄၅)ရုံး
ခရိုင်တရားရုံး (၄)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၁၈)ရုံး
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံး (၁)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၃)ရုံး ခရိုင်တရားရုံး (၁၁)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၃၄)ရုံး
ခရိုင်တရားရုံး (၄)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၇)ရုံး
ခရိုင်တရားရုံး (၂)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၁၀)ရုံး
ခရိုင်တရားရုံး (၄)ရုံး နှင့် မြိူ့နယ်တရားရုံး (၉)ရုံး
ခရိုင်တရားရုံး (၅)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၁၇)ရုံး
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ:QXQ080/sandbox&oldid=632070" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။